13 May 2016 पत्रपत्रिका
उफ् म नर्स !
आज संसारभर बिश्व नर्सिङ दिवस मनाइरहँदा म आफु नर्स भएको मा गर्व गरिरहेको छु । ‘गाह्रो समयको अन्त्य हुन्न तर गाह्रो मान्छेहरुको साथ सदैब हुन्छ’ यो धारणा लागु हुन्छ केवल नर्सिङ पेशामा ।
जब जीवनमा केहि मुख्य बाटो छान्ने अवस्था आउँछ, म जस्तै धेरैजनामा नर्सिङ भन्ने शव्दाबली वरपर परिक्रमा गरेकै हुन्छन् । अहो ! सेतो सफा कपडा, बिराम...
08 May 2016 टेलिभिजन अनलाइन